Sidaas yeedhay “sun ah” hip implants waxaa lagu iibin by Johnson & Johnson hoosaad, Depuy..
dib u eegis A gudaha ku sameeyay Johnson & Johnson ugu dhaqsaha badan ka dib markii dib loogu soo yeeri galaha a hip la welwelay ogaaday in shirkadda ayaa ku filan ma qiimeeyo khatarta qalabka ka hor waxaa la isticmaalaa in ka badan 90,000 bukaanka.
implants hip sun loo isticmaalo in kumanaan Howlgalada ee Britain laga iibiyey shirkad taas oo ugu yaraan saddex sano ogaa in ay noqon kartaa khatar ah, waxaa la sheegay maanta.
Johnson&hoosaad Johnson DePuy xayaysiiyo implants 'bir-on-biraha' hip inkastoo Dhakhtar sare ah oo lagu eedeeyey sheegaya mid ka mid ah madaxda sare ee soo saaraha in ay ahaayeen aadka u halista ah in bukaanka.
Boqolaal bukaanka ayaa hadda haysta bedelka miskaha ah, taas oo loogu talagalay in ay socon nolosha, inkastoo DePuy la sheegay in lagu had iyo goor ka digay ku saabsan raadka ay, sidaana waxa sheegay Daily Telegraph.
Waxaa jira tiro ka mid ah Harley Street rugaha bedelka Hip in dalab kartaa bedelka ee miskaha haleysan Depuy.